कोरोनाले नि’धन भएको ब्यक्तिको छैन आँखा, घाँटीमा पनि गहिरो चो’ट (भिडियो सहित) – Dainik Sangalo
कोरोनाले नि’धन भएको ब्यक्तिको छैन आँखा, घाँटीमा पनि गहिरो चो’ट (भिडियो सहित)
September 22, 2020 1445
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीलाई टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज जानबाट प्रशासनले रोकेको छ । विभिन्न माग राख्दै जुम्लाबाट आफ्नो १९औं सत्याग्रह थालेका डा. केसी काठमाडौं आएर टिचिङ जान लागेका थिए ।
डा. केसीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अब काठमाडौं जाने र सत्याग्रह जारी राख्ने बताएका थिए । केसी आज बिहान काठमाडौं आएका हुन् । उनलाई प्रहरीले ट्रमा सेन्टर पुर्याएको छ ।
वीर अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा अहिले ट्रमा सेन्टरबाट चलिरहेको छ । वीरलाई सरकारले कोभिड अस्पतालमा परिणत गरेसँगै ट्रमामा सेवा सरेको हो ।
डा. केसीले भदौ २९ गतेदेखि जुम्लाको सिंहचौरबाट सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । प्रशासनले उनलाई आइतबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेको थियो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि प्रशासनले डा. केसीलाई प्रतिष्ठानमा सारेको थियो ।
Prevतीन तले भवन अ’चानक भत्किदा १० जनाको मृत्यु, कयौँ फ’से पछि उद्दारको लाई त,नाव…
Nextलामो दूरीको यात्रामा फेरि भर्खरै लगाइयो यी येस्ता नयाँ नियमहरु ; सबैले जान्नै पर्ने !
५० बर्षीय जितबाहदुरले……यस्तो ड’र ला’ग्दो सेतिको पुलबाट किन हा’ म फाले..?
दुखद घटना चारै सन्तान अपाङ्गता भएको परिवारका जेठो छोराको मृत्यु